के तपाईको उचाई कम छ ? अग्लो देखिन यसो गर्नुहोस् - Kendrabindu Nepal Online News
के तपाईको उचाई कम छ ? अग्लो देखिन यसो गर्नुहोस्
१९ असार २०७६, बिहीबार १९:०८
आर्कषक व्यक्तित्वको लागि राम्रो देखिनु वा सुन्दर अनुहार हुनु मात्र होइन । आकर्षक देखिनको लागि शरिरको उचाई पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । कसैको शरिरको उचाई कम हुन्छ । उचाई कम हुँदा कपडा लगाउँदा राम्रो देखिदैन् । यस कारण आफुलाई अग्लो देखाउनको लागि हरेक प्रयास गर्छन् ।
तर थोरै मात्र ध्यान दिएमा होचो मानिस पनि स्टाइलिस देखिन सकिन्छ । उचाई कम हुँदा पनि अग्लो देखाउन सकिन्छ । गलत तरिकासँग कपडा लगाउँदा पर्फेक्ट देखिदैन् । स्टाइल एक्सपर्ट र फेसन डिजाइनरको अनुसार रङ र स्टाइलिस कपडा सहि तरिकाले लगाउँदा होचो मानिस पनि अग्लो देखिन सकिन्छ । कस्तो डे«सिङ स्टाइलको कारण होचो मानिस पनि अग्लो र स्लिम देखिन सक्छ ।
डार्क र सिंगल कलरको कपडा लगाउनेः
पातलो, अग्लो र सुन्दर देख्नको लागि होचो महिलाहरुले डार्क र सिंगल कलरको कपडा लगाउनुपर्छ । मल्टिकलरको कपडाले शरिर मोटो र भद्दा देखिन्छ । त्यसैले डार्क र सिंगल कलर कपडा लगाउनाले अग्लो देखिन्छ ।
भर्टिकल्स लाइन भएको कपडा लगाउनेः
भर्टिकल्स लाइन भएको कपडा लगाउँदा अग्लो देखिन्छ । यस्तो प्याटर्न भएको कपडा लगाउँदा चौडाईमा भन्दा लम्बाइमा फोकस हुन्छ । त्यसैले अग्लो देखिनका लागि भर्टिकल्स लाइन भएको कपडा लगाउने ।
सहि साइज र फिटिङको ध्यान राख्नेः
शरिर मोटो भएकाहरुले धेरै लुज र धेरै फिटिङ कपडा लगाउनबाट बच्नुपर्छ । कपडाको साइज र फिटिङमा ध्यान दिनुपर्छ । धेरै लुज कपडा लगाउँदा होचो र मोटो देखिन्छ । त्यसैले यस्तो कपडा लगाउनुहोस्, जसले पर्फेक्ट, स्लिम र अग्लो देखाओस् ।
ठूला ठूला प्रिन्ट भएको कपडा नलगाउनेः
यदि शरिर मोटो छ भने ठूला ठूला प्रिन्ट भएको कपडा नलगाउनुहोस् । यस्ता कपडा लगाउँदा शरिर मोटो र होचो देखिन्छ । होचो मानिसले त्यसैले सानो प्रिन्ट भएको कपडा लगाउने । होचो हाइट भएकाहरुले हाइनेक लगाउनबाट पनि बच्नुपर्छ । गर्दन र घाँटी छोपिने कपडा लगाउँदा शरिरको उचाई कम देखिन्छ । त्यसैले गला भी आकार र गोलो आकारको भएको कपडा लगाउने ।
हेयर स्टाइलका कारण शरिरको उचाई कम देखिनमा अहम भुमिका हुन्छ । उचाई कम भए हेयर स्टाइलबाट उचाई अग्लो देखाउन सकिन्छ । कपाललाई माथि उठाएर बाँध्दा अग्लो देखिन्छ ।
अग्लो देखिनको लागि हाई हिल वा जुत्ता लगाउन सकिन्छ । उचाई कम छ भने हाई हिल लगाउँदा अग्लो देखिन्छ । सुन्दर र आकर्षक देखिनको लागि हाई हिल जुत्ता लगाउन सकिन्छ ।
Prevराहुल पछिको भारतीय कंग्रेस
बालबालिकासँग हामी : हाम्रो दायित्वNext